‘उपभोक्ता सन्तुष्ट हुने काम गरेको छु’ « Loktantrapost
‘उपभोक्ता सन्तुष्ट हुने काम गरेको छु’
९ माघ २०७५, बुधबार ०८:५८
प्रगतीशिल तथा परिवर्तन पक्षधर समूहबाट अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार
योगराज भट्टराई (योगेश)
–‘कालिका वन जनताको धन, गरौँ सबैले चौतर्फी आय आर्जन’ भन्ने नारासहित कालिका वनलाई जिल्लाकै उत्कृष्ट वनको रुपमा अगाडि बढाउने हाम्रो योजना छ । सामुदायिक वन संरक्षण र सम्बर्धनका लागि अघिल्लो कार्यकालमा मैले नेतृत्व गरेको टिमले गरेका कामलाई मूल्याङ्कन गर्दै प्रगतीशिल तथा परिवर्तन पक्षधर समूहका तर्फबाट अध्यक्षमा मेरो उम्मेद्वारी हो । कामको उच्च मूल्याङ्कनका आधारमा मलाई यहाँका उपभोक्ताहरुको अपार माया र स्नेह छ । त्यसैले पनि हामीलाई आगामी निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमतले विजय गराउनुहुुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
तपाईंंका चुनावी एजेण्डा के–के छन् ?
–अघिल्लो कार्यकालमा भएका उपभोक्तामैत्री कामलाई निरन्तरता दिँदै कालिका सिमसारलाई जिल्लाकै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने प्रमुख एजेण्डा हो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नीति अनुरुप यस वनलाई अगाडि बढाइएको र आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिइनेछ । विपन्न वर्गका उपभोक्ताहरुलाई घर बनाइदिने, ग्यास, चुलो, खाट, जस्तापाता लगायत उपलब्ध गराउने कार्यक्रम अगाडि बढाउने छु । हाम्रो क्षेत्रमा पर्ने सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्र्री साथै विद्यालय पोशाकको व्यवस्था गरिनेछ । ४० घर परिवारलाई सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी स्वच्छ पिउने पानी र शौचालयको व्यवस्था गरिनेछ । कालिका सिमसार तथा पर्या–पर्यटन क्षेत्रलाई गुरुयोजना अनुसार प्रवेशद्वार, आकर्षक कम्पाउन्ड वाल, चिल्ड्रेन पार्क, सभा हल, २२ फिटको मेचीनगर झरनालगायतका योजनालाई अगाडि बढाइनेछ । उपभोक्ताहरुको जीवनस्तर उकास्न अन्य थुप्रै कार्यक्रम ल्याइनेछ ।
–मेरो कार्यकालमा थुप्रै कामहरु भएका छन् । विशेषगरी कालिका सिमसारको ‘मास्टर प्लान’ बनेको छ । यो गौरवको विषय हो । जसअनुसार कालिका सिमसार तथा पर्या–पर्यटनको नाममा १३ हेक्टर जग्गा सिमसारको नाममा दर्ता गरिएको छ । अति विपन्न वर्गका उपभोक्ताको पहिचान गरी १० वटा घर निर्माण गरिएको छ । उपभोक्तालाई दिइँदै आएको सेवा सुविधाहरु घाँस, दाउरा, काठ वितरण गर्ने पद्धतिलाई विधानत पारदर्शी ढङ्गले अगाडि बढाइएको छ । मेरो कार्यकालमा उपभोक्ता सन्तुष्ट हुने गरिको काम गरेको छु । त्यसैले, उहाँहरुले मलाई अत्यधिक बहुमतका साथ विजयी गराउनुहन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएको छु ।
–मसँग प्रतिष्पर्धा गर्न चुनावी मैदानमा उत्रिनु भएका ज्ञानुजीलाई सौहार्दपूर्ण वातावरणमा अतिरञ्जित नभई अगाडि बढ्न अनुरोध गर्दछु । सर्वसम्मतको प्रयास पटक–पटक गरियो । तर, अधिकांश उपभोक्ताले वनमा फेरि पनि मलाई नेतृत्वका रुपमा अघि सारेपछि उम्मेद्वार बनेको हुँ । यसलाई मैले स्वभाविक रुपमा लिएको छु ।
मतदातालाई के भन्न चाहनु हुन्छ ?
–मेरो नेतृत्वमा विगतमा वन समूहले उपभोक्ताको हितमा गरेका सुधार र कार्य सम्पादनलाई आदरणीय मतदाता महानुभावहरुले बुझ्नु भएकै छ । समूहलाई जिल्लाकै तेस्रो उत्कृष्ट सामुदायिक वनका रुपमा स्थापित गर्न उपभोक्ताको सहयोग महत्वपूर्ण थियो । मेरो टिमले आगामी कार्यकालमा यस वनलाई जिल्लाकै उत्कृष्ट बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु । भावी दिनमा पनि उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष रुपमा लाभ हुने कार्ययोजना हाम्रो प्रतिबद्धता पत्रमा समावेश गरेका छौँ । समय अभावका कारण पूरा गर्न नसकेका अधुरा काम फत्ते गर्न यहाँहरुको मतको हामीलाई खाँचो छ । हाम्रो टिममा समूहको अघिल्ला कार्यकालमा पनि जिम्मेवारी लिएका अनुभवी साथीहरु हुनुहुन्छ । त्यसैले मतदाता आफैँ सचेत हुनुहुन्छ ।
–यस संस्थाका सम्पूर्ण उपभोक्ता महानुभावहरुमा म लगायत मेरो नेतृत्वको प्रगतीशिल तथा परिवर्तन पक्षधर समूहलाई अत्यधिक बहुमतका साथ विजयी गराउनुहुन विशेष अपिल गर्दछु ।